IINDLELA EZILI-15 EZIZEZONA ZIPHAMBILI KUGOOGLE PLAY STORE (2022) - ITHAMBILE
Iindlela ezili-15 ezizezona ziPhambili kuGoogle Play Store (2022)
Iposwe kwiIgqityelwe ukuvuselelwa: NgoJanuwari 2, 2022
IVenkile kaGoogle Play ngowona mthombo uphambili kubo bonke abasebenzisi be-android kwihlabathi liphela ukukhuphela ii -apps ezahlukeneyo, imidlalo, iincwadi kunye neemuvi. Nangona kunjalo, ngenxa yezithintelo zikaGoogle, usetyenziso oluninzi alufumaneki kwiVenkile yeGoogle Play. Ii-Apps ezidumileyo zemidlalo ezifana neDream11, iQela lam le-11, ezifunwa kakhulu, azifumaneki kuGoogle Play Store. Kodwa oko akuthethi ukuba awukwazi ukuzonwabela kwisixhobo sakho se-Android. Iifayile ze-APK ziyafumaneka ukuba zikhutshelwe usetyenziso olunjalo kwibhrawuza yakho ye-intanethi.
Ke ukuba ungumlandeli walo naluphi na usetyenziso olunjalo kwaye awukwazi ukulisebenzisa ngenxa yezizathu ezahlukeneyo, akufuneki ube nexhala. Le yeyona ndawo ilungileyo eya kusombulula ingxaki yakho ngokubonisa ezinye iindlela ezininzi kuGoogle Play Store. Izisombululo zokumisa enye kuzo zonke izinto ezikhutshelweyo ezilahlekileyo kuGoogle Play Store,
Le mithombo yomntu wesithathu iya kukunceda ekukhupheleni ezo apps zingagunyaziswanga. Ngaphandle kokukhuphela ii -apps ezingagunyaziswanga, ezi ziya kukunceda ukhuphele ii -apps ezihlawulweyo simahla okanye zinikeze izaphulelo kunye namathuba okonga imali. Ezinye zeapps ezinexabiso eliphezulu kwiVenkile kaGoogle Play zibonelelwa ngexabiso eliphantsi kule mithombo yomntu wesithathu- uGoogle udlala ezinye iivenkile.
Ngaphezu koko, ezinye zezicelo azifumaneki kweminye imimandla okanye zisekwinqanaba lokuqala lophuhliso. Akunakwenzeka ukuba ukhuphele usetyenziso oluvela kuGoogle Play Store.
Ke ukuba ujongene nayo nayiphi na le miba ingasentla, ungathembela kwezinye iindlela ezahlukeneyo kuGoogle Play. Ezo ndlela ezizezinye zinokukhutshelwa kwisikhangeli sewebhu.
Iimfuno zangaphambili zokuKhuphela ezi Apps kwiZixhobo ze-Android
Nangona kunjalo, ngaphambi kokuba uqhubeke phambili, kufuneka utshintshe useto lwakho ukuvumela ukukhuphela kumthombo wangaphandle. Zonke izixhobo ze-android zithintele ukukhuphela okunjalo kwimithombo yangaphandle ngokungagqibekanga ngenxa yezizathu zokhuseleko.
Ke kufuneka ulandele la manyathelo angezantsi ukwenza ukhuphelo kumthombo wangaphandle:
1. Vula iwijethi yoSeto kwiscreen sakho sasekhaya kwifowuni yakho ye-android
2. Yiya kukhuseleko.
3. Nika amandla ukukhuphela kumthombo ongaziwayo okanye wangaphandle.
#1. Isibuko se-APK
#9. I-APK ecocekileyo
#13. Imarike ye-AC
#14. Ivenkile yeOpera ehambayo
#15. Thobekile Bundle
Nazi ezona ndlela zibalaseleyo zokudlala zikaGoogle onokuthi uzikhuphele ngaphandle:
I-APKMirror yenye yeyona ndlela ibalaseleyo yoDlalo lukaGoogle. Iqulethe kuphela ii -apps zasimahla onokuthi uzikhuphele ngaphandle kokufumana iindleko. Usetyenziso lweBeta olungafumanekiyo kuGoogle Play Store lunokukhutshelwa kweli qonga.
Zonke izicelo zicwangciswa ngokolandelelwano olufanelekileyo lobalo-maxesha. Kukhuselekile ngokupheleleyo ukukhuphela kulo mthombo. Ikwabonisa iitshathi ezahlukeneyo zee -apps ezidumileyo mihla le, ezinokukunceda ukuba ufumane ii -apps ezidumileyo nezihamba phambili ngokukhawuleza. Ungasebenzisa lo mthombo kuzo zombini idesktop kunye nesixhobo sakho se-android.
I-APK Mirror inewebhusayithi yayo esemthethweni, efunyenwe kuyo nayiphi na i-desktop okanye isixhobo esiphathwayo sokukhuphela. Ikwabonisa iireyithingi kunye nophononongo lweapps ezahlukeneyo ukukunceda wazi umgangatho weapps ezahlukeneyo kwiiwebhusayithi zayo. Ikwafumaneka ukukhuphela kuGoogle Play Store ngokwayo.
Ii-Apps ezikwi-F-Droid zihlelwe ngokufanelekileyo ukwenza lula uphendlo lwakho. Yenye yeendlela ezithembekileyo kuGoogle Play Store. Ikwangomnye wemithombo emidala yokukhuphela usetyenziso. Inyani epholileyo malunga ne-F-droid kukuba sisicelo sesisa esisebenza kwiminikelo ikakhulu.
Nangona kunjalo, i-F-Droid isetyenziselwa ikakhulu usetyenziso lwemveliso. Ngoko ilungile ukuba abaphuhlisi baphonononge. Kodwa mva nje, uninzi lwee-apps eziqhelekileyo sele zifumaneka kwi-F-Droid. Icandelo leMidlalo lincinci, kodwa linazo ezinye ii -apps ezahlukeneyo ezingekhoyo kuGoogle Play Store.
I-F-Droid ine-app yayo eyahlukileyo enokukhutshelwa kwiwebhusayithi yayo esemthethweni simahla. Uyilo lwe-app luyamangalisa kwaye lwenziwe lula ukwenza kube lula ukukhuphela usetyenziso. Enye yezinto ezingalunganga ze-F-Droid kukuba, njengevenkile yeGoogle Play okanye nayiphi na enye indlela; ayiboneleli ngereyithingi okanye uphononongo lweapps ezikhoyo kuyo.
Kodwa usetyenziso lwasimahla olufumanekayo kwi-F-Droid lukhulu kakhulu, ke awuzukuyikhathalela i-drawback encinci ngolo hlobo.
I-Amazon Appstore yenye yeevenkile ezinkulu zezicelo ezinosetyenziso olungaphezulu kwe-300,000.
Ke iba yenye yeendlela ezizezinye kuGoogle Play Store. Isebenza ngendlela efana kakhulu neGoogle Play Store, kwaye ke iyakonwabela ukuhoywa kakuhle kuninzi lwabasebenzisi abajonga enye indlela kaGoogle Play, enomtsalane ngokulinganayo.
Ibikade iliphepha elisemthethweni leAmazon Prime. Kuba uphawu olukhulu luyibuyisela emva, akufuneki ube nexhala malunga nokhuseleko kunye nobumfihlo. Ibonelela nge-premium apps simahla okanye ngamaxabiso aphantsi. Le Appstore inomsebenzi omnye owahlukileyo, obonelela ngee -apps ezahlukeneyo ezihlawulelwayo simahla ngeentsuku ezahlukeneyo. Eli nqaku laziwa ngokuba yi-'App of the Day'. Ke unokuza ujikeleze kwaye ujonge yonke imihla kwii -apps ezahlukeneyo ezihlawulelwayo, ezinikezelwa simahla.
I-Amazon Appstore ine-app yayo, enokukhutshelwa ngaphandle kokwenza nayiphi na intlawulo. Inojongano oluhle nolulula, oluyenza ibeyeyona ndlela ithandwayo xa kuthelekiswa nezinye iindlela zikaGoogle Play Store.
I-Aptoide ngomnye umthombo wakudala ovulekileyo wokukhuphela usetyenziso. Iiapps ezidumileyo ezinje ngoFacebook kunye noWhatsApp zikwakhona, ezinokukhutshelwa simahla. Yaziswa ngo-2019 kwaye inabasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezi-3 kwihlabathi liphela.
Ngaphandle komsebenzisi ophathwayo, abasebenzisi bedesktop banokuyisebenzisa ukukhuphela iintlobo ezahlukeneyo zeapps.
Lo mthombo ukwakuvumela ukuba ukhuphele usetyenziso lwabantu abadala olungafumanekiyo kwiVenkile yeGoogle Play kwaye ineeapps ezingaphezu kwe-7 Lakh ezifumanekayo kuwe. Yenye yezona ndlela zidumileyo nezikhutshelweyo kwiVenkile yeGoogle Play.
I-Aptoide ikwanezinye iisoftware ezahlukeneyo ngaphandle kweAptoide Apps. Olunye uguqulelo lwesoftware ebonelelwe ngu-Aptoide yi-Aptoide yabantwana esetyenziselwa abantwana, i-Aptoide TV yeeTV ezihlakaniphile kunye neebhokisi ezisezantsi, kunye ne-Aptoide VR, kwakhona yabantwana.
Nangona kunjalo, ezinye ii-apps ezikhululekileyo zinokuchaphazela inkqubo yefowuni yakho, ngoko ke kungcono ukukhuphela i-antivirus kwangaphambili ukuze uqinisekise ukuba isixhobo sakho se-android sikhuselekile kuyo nayiphi na intsholongwane enjalo.
I-GetJar yenye eyenye ekhoyo ekhoyo nangaphambi koKudlala kukaGoogle. Ngaphezulu kwe-800,000 yee-apps, i-GetJar yenye enye indlela esempilweni kuGoogle Play Store.
I-GetJar ibonelela ngemidlalo eyahlukeneyo kunye nee -apps kwaye ikubonelela ngeendlela zokukhala iithowuni, imidlalo epholileyo kunye nemixholo emangalisayo enokuthi ikhutshelwe simahla. Ukwenzela lula, ii-apps zihlelwa kwaye zicazululwe ngokufanelekileyo ngeendlela ezintsha onokuthi uzithande. Intshayelelo eneenkcukacha yeapps inikezelwe ukukunceda kufakelo, iimfuno, kunye nokusetyenziswa kwe-app.
Ingxaki enye enkulu eyayanyaniswa ne-GetJar kukuba ezinye zeapps zayo azihlaziywanga ngokuchanekileyo, nto leyo eya kukunyanzela ukuba ukhuphele usetyenziso lwakudala.
Fumana i-APK yeMarike ye-APK yenye enye indlela yeVenkile kaGoogle Play, eyohlukileyo kwaye inkulu ngobukhulu kunye nokwahluka.
Zonke iifayile ze-APK zeGoogle Play Store apps ziyafumaneka kule venkile yosetyenziso lomntu wesithathu.
Ibonelela ngendlela elula yokukhangela eya kukunceda ekufumaneni iapp oyithandayo ngokukhawuleza. Enye yezona zinto zilungileyo malunga nale ntengiso ye-app kukuba xa i-app ifakiwe, ikuthumela izaziso rhoqo malunga nohlaziyo olwahlukeneyo kwaye iqinisekisa ukuba zonke iifayile zakho ze-APK zihlaziywa kuguqulelo lwamva nje. Akukho sicelo sinye kule venkile yesibini ye-app esiza kukucela nayiphi na imali yofakelo. Bonke bakhululekile!
Olunye uphawu oluhle kakhulu kukuba unokugcina iifayile ze-APK kwaye uzifake nanini na xa unqwenela ukuba kamva, nangaphandle konxibelelwano lwe-intanethi olusebenzayo.
Ubungakanani bofakelo bokufumana i-APK yeMarike ye-APC yi-7.2 MB, kodwa ayinayo i-Split APKs okanye iDatha ye-OBB.
Ukhuseleko yenye inkalo yenkxalabo kulo mthombo. Ke ngoko, kuyacetyiswa ukuba ufake ngaphambili nayiphi na isoftware ye-antivirus kwisixhobo sakho ukukhusela isixhobo sakho se-android.
Enye into eyenza i-Mobogeniedifferent kwezinye iindlela kukuba ikuvumela ukuba ukhethe ulwimi olukhethayo kwiilwimi ezahlukeneyo ezikhoyo. Ke inceda nabasebenzisi abangengabo IsiNgesi ngokunjalo.
Isiseko somsebenzisi weMobogenie sikhulu kakhulu kunezinye iindlela ezininzi kuGoogle Play Store. I-Mobogenie ikwabonelela ngenketho yokugcina. Unokusebenzisa iMobogenie kuzo zombini iilaptop kunye neefowuni eziphathwayo. Eyona nto ilungileyo yolu khetho kukuba unokudlulisa usetyenziso phakathi kwefowuni ephathwayo kunye nelaptop ngaphandle kokuyikhuphela kwakhona ngokwahlukeneyo.
Endaweni yokukhuphela ifayile ye-APK, ityekele ekuncedeni uququzelele kwaye ulawule ezi Fayile ze-APK kwaye zisebenze njengesixhobo. Iya kukunceda kakhulu ekwandiseni ulawulo lwefayile. Ezinye izinto ezipholileyo kukukhangela ngobuchule, imiyalelo eyongezelelweyo, jonga zonke iifayile, imo yokulungisa ingxaki. Unokufikelela kwimithwalo yomxholo ovela kwiMoboGenie.
Ngaphandle kwengqokelela enkulu yosetyenziso, iMobogenie ikwakuvumela ukuba ukhuphele iiklip zeaudio, iividiyo, kunye nemifanekiso simahla. Unako nokuba ugcino kwaye uthumele ezi fayile ngokukhawuleza.
Ezinye iingxaki zosetyenziso mhlawumbi yingqokelela elinganiselweyo kunye nokungakwazi kwayo ukubona ezinye iimodeli zeselfowuni. Kulo lonke, i-Mobogenie iluncedo olukhulu.
I-App Brain ibonelela ngekhathalogu yeeapps zeprimiyamu ezinokukhutshelwa simahla. I-App Brain inewebhusayithi yayo kunye ne-app, enokusetyenziswa ukukhuphela ii -apps ezahlukeneyo, ngakumbi ii-apps zeprimiyamu. Injongo ephambili ye-App Brain kukwenza abaphuhlisi be-Android baphumelele kwaye babanike indlela. Ke, ukuba ungumphuhlisi, unokukhuthaza kwi-AppBrain kwaye ufumane imali ngee-apps ozenzayo.
Kuba esi sisixhobo sokuqala abaphuhlisi abasisebenzisayo ukuvavanya usetyenziso lwabo, unokufumana ezinye ii -apps ezihlawulweyo simahla kwi-App Brain.
I-App Brain iphantse inazo zonke ii-apps zikaGoogle Play Store kunye nezinye ngaphandle kwezimbalwa. Ukuqala ukusebenzisa i-App Brain, kuya kufuneka uqale wenze kwaye ubhalise iakhawunti yakho nge-App Brain. Emva kokubhalisa, unokukhuphela usetyenziso ngokweminqweno yakho.
Kwakhona Funda: Khuphela ngesandla kwaye ufake iGoogle Play Store
Ukujonga kunye nojongano lomsebenzisi kulula, kodwa icandelo lomdlalo libuthathaka, litshintshiwe, kwaye liphuculwe ngokweemfuno zomsebenzisi. Unokufikelela kwikhathalogu kwi-App Brain ngewebhusayithi yayo kunye nengqondo ye-App.
I-APK Pure yenye enye indawo kwiVenkile yeGoogle Play yabasebenzisi be-Android. Inokhetho oluhle lwe-app kunye neendidi ezininzi.
Uyilo kunye nokuhamba zilungile nge-interface ecocekileyo yomsebenzisi. Usetyenziso kunye nemidlalo yobungakanani obukhulu obunje nge-Call of duty kunye ne-PUBG, engaphezulu kwe-2GB, zikwafumaneka ukuba zikhutshelwe kweli qonga. Kwanosetyenziso oluyimfuneko olunje ngeeMephu zikaGoogle kunye neGmail nazo ziyafumaneka.
Lo Mthombo uza nenye isoftware ebizwa ngokuba yi-APK updater, iqinisekisa ukuba zonke iiapps zakho ezikhoyo zihlaziywa rhoqo ngaphandle kobugxwayiba.
I-Slide Me iyafana ne-Mobogenie kunye ne-Aptoide. Iinkqubo ezahlukeneyo ezinxulumene ne-ofisi ezifana ne-Ofisi ye-WPS, Nksz Word, Ms Excel zinokukhutshelwa kulo mthombo.
Ukuba ii-apps sele zikhutshelwe kwisixhobo sakho kuyo nayiphi na enye indlela ke isilayidi sam sinokusetyenziselwa ukuhlaziya ezo setyenziso sele lufakiwe. Ubungakanani be-app yeslayidi yam buncinci kakhulu, kwaye ayihlali ndawo yaneleyo yokugcina ifowuni yakho ephathwayo. I-app inengqokelela elungileyo yemidlalo kunye nezinye ii-apps eziluncedo kubasebenzisi be-Android.
I-app ye-Slide Me inokukhutshelwa simahla kwiwebhusayithi yayo emva kokulandela imiyalelo yephepha lasekhaya. Kuya kufuneka undwendwele iphepha lasekhaya rhoqo ukujonga uhlaziyo olutsha. Esinye isikhalazo esikhulu malunga neli qonga kukuba lixhaswa kuguqulelo oludala lwezixhobo ze-android.
Le Nto inye ikwaluncedo kubaphuhlisi be-App abafuna ukufumana usetyenziso lwabo lwe-Android apho ukuze abantu bazame kwaye bathande.
IVenkile yeYalp yenye enye indlela elungileyo kwiVenkile kaGoogle yokuKhuphela usetyenziso lweevenkile zokudlala ngaphandle kokusebenzisa iGoogle Play Store.
Awudingi naluphi na ubhaliso lweakhawunti ukusebenzisa le app. Ikhona kwaye ilungele ukusetyenziswa. Ivenkile yeYalp ibonelela ngolwazi olusisiseko lwazo zonke ii-apps ezifana nenani lokukhuphela, umhla wokuphehlelelwa, ukuphuhlisa igama, njl
Akukho mfuneko yokukhuphela usetyenziso olwahlukileyo lwevenkile yaseYalp; unokukhuphela ngokuthe ngqo usetyenziso kwiwebhusayithi yayo ephambili. Nangona kunjalo, ujongano lwayo lomsebenzisi indala kancinane, nto leyo eyenza ukuba idume kancinci kunezinye iindlela zeGoogle Play Store.
Owona mthombo uyinyani kunye nowokwenyani wokukhuphela ii -apps emva kweGoogle Play Store yivenkile esemthethweni ye-Samsung ebizwa ngokuba yi-Galaxy apps. Ukwazi ukuba i-Samsung ligama elixatyiswe kakuhle kwisebe letekhnoloji, unokuthembela kwii-apps ze-galaxy ukuba ibe yindlela efanelekileyo.
Iifowuni zeSamsung zihlala zinaso esi sicelo sifakwe ngaphambili, kwaye abasebenzisi bayayithanda!
IGalaxy Apps lukhetho oluhle kakhulu kubasebenzisi beSamsung. Inojongano oluhle lomsebenzisi kunye nokuhamba. Yeyona ndlela ikhuselekileyo njengoko ixhaswa luphawu oludumileyo lweSamsung.
Imixholo emininzi, iithowuni ezikhalayo, iiwallpapers, kunye neefonti zinikezelwa ngaphandle kwee-Apps ezenziwe zafumaneka kuwe.
Ujongano lwevenkile yomnyele lunomtsalane kwaye luza ngezikhumba ezahlukeneyo. Yivenkile enkulu yesibini yabasebenzisi be-Android abaneefowuni ze-Samsung.
Ngaphandle kwezi zibonelelo zingasentla, ii-Galaxy Apps azithandwa kakhulu ngenxa yokungabikho kwayo okucacileyo okufumaneka kuphela kubasebenzisi be-Samsung. Ngaphezu koko, uninzi lweeapps ziyafumaneka ngexabiso leprimiyamu, abasebenzisi abaninzi abangakwaziyo ukulihlawula.
Kanye njenge-Aptoide kunye ne-GetJar, iMarike ye-AC inengqokelela enkulu yee-apps kunye nemidlalo. Ngaphezulu kwesigidi esi-1 se-apps kunye nemidlalo, iMarike ye-AC yeyona nto inamandla kuGoogle Play Store.
IMarike ye-AC inee-apps ezihlawulweyo nezisimahla. Banikezela ngeenguqulelo zasimahla zeeapps ezihlawulwayo ngokuziqhekeza. Imakethi ye-AC ibonelela ngeendlela ezininzi zokuhlawula ezingafumanekiyo kwiVenkile ye-Google Play yezo zihlawulweyo.Iwebhusayithi yeMarike ye-AC inokufikelela ngokulula kuzo naziphi na izixhobo ze-android okanye idesktop.
Babanga ukuba yindawo ekhuselekileyo yokukhuphela usetyenziso njengoko bevavanya uninzi lweeapps abazibambayo. Imakethi ye-AC ixhasa iilwimi ezingama-20+ ukuze kuqondwe lula abasebenzisi. Isantya sevenkile yeapp asidanisi kwaphela kuba siphendula kakhulu xa kujongwa ukhuphelo apho.
Banoluntu olufudumeleyo kunye nenkqubo yenkxaso yokuphendula zonke ii-FAQs zakho kunye namanye amathandabuzo.
Eyona nto ingalunganga okanye umda walo mthombo kukuba ayivumeli umsebenzisi ukuba ajonge okanye alinganise usetyenziso. Abasebenzisi abaninzi baye bakhalaza malunga nokuwa kweMarike ye-AC rhoqo kwaye kuchaphazela impilo yebhetri yefowuni yabo.
I-Opera Mobile yaqalwa njengebhrawuza yewebhu. Nangona kunjalo, ngoku bavule ivenkile yabo ye-app ebizwa ngokuba yi-Opera Mobile Store. I-Opera ngokuthe chu ifumana ukuthandwa kuzo zonke ii-spectrum eziphathwayo njengoko izixhobo zayo beziqhuba kakuhle ngokumangalisayo emarikeni.
Le yenye indlela ekhuselekileyo nethembekileyo kuGoogle Play Store kwaye ibonelela ngemidlalo eyahlukeneyo ehlawulweyo simahla. Ujongano lucocekile, kwaye uyilo lwewebhu lugqwesileyo. Ngaphandle kwezicelo, umculo unokukhutshelwa. Le yenye yeendlela ezizezinye ezibonelela ngenkonzo yesikhangeli kunye nevenkile yayo yezicelo zeselfowuni.
Iselfowuni ye-Opera iqale ivenkile yayo ye-app mva nje, ngoko ke ayidumanga kakhulu phakathi kwabasebenzisi kuba uninzi lwabo bengayazi. Kwiminyaka ezayo, inokuvela enye indlela enamandla kwiVenkile yeGoogle Play.
Kubaphuhlisi abafuna ukukhulula usetyenziso lwabo kwimarike ye-Android, lukhetho oluhle kakhulu.
Njengevenkile yangaphambili ye-Opera ephathwayo, i-Humble Bundle ayizange isungulwe njengevenkile yosetyenziso kwinqanaba langaphambili. Ekuqaleni, yayisetyenziswa njengeqonga lokudlala imidlalo ye-intanethi ngezinye iifizi zeprimiyamu.
Kutshanje baye baqala ukuvumela abasebenzisi ukuba bakhuphele imidlalo kunye neeapps. I-Humble Bundle yindawo enye yokuya kubadlali kuba inemidlalo emininzi enomdla ekhoyo engafumanekiyo kuGoogle Play Store.
Esinye sezizathu ezenza i-Humble Bundle ibe yenye ebuthathaka kwivenkile kaGoogle Play kukuba igxile ikakhulu kwimidlalo, kwaye incinci kakhulu ingqalelo inikwa usetyenziso olungadlaliyo. Ayiyondawo yokugcina usetyenziso kodwa yindawo yokudlala yokukhuphela iintlobo ezahlukeneyo zemidlalo.
Iindlela ezi-2 zokurhoxisa uBhaliso lwePremium yeYouTube
IiApps ezingama-20 zokuHlela iiFoto eziBalaseleyo kwi-Android
10 Eyona Extratorrent.CC Enye indlela
Ngaphezulu kwe-15 zezinye zeendlela ezilungileyo zeGoogle Play Store. Siphande ngokucokisekileyo kwaye sakhetha le mithombo ye-15 yomntu wesithathu, esebenza njengezinye iindlela kuGoogle Play Store. Imbalwa kule mithombo yolwazi ingasentla enokuphinda isetyenziswe kwidesktop yokukhuphela usetyenziso.
Onke la maqonga ali-15 aneempawu ezahlukeneyo kwaye anelise iintlobo ezahlukeneyo zeemfuno. Ezinye zilungele imidlalo, ngelixa ezinye zilungile kwii-apps ezingadlaliyo. Abanye babonelela ngeenketho zeentlawulo ezahlukeneyo ezingafumanekiyo kuGoogle Play Store. Kukho amaqonga ambalwa abonelela ngokhetho lokukhuphela imixholo, imifanekiso, iithowuni ezikhalayo, amaphephadonga kunye nezinye ezininzi.
Ngokuxhomekeke kuhlobo lwemfuno yakho kunye neemfuno, ungakhetha nayiphi na imithombo engasentla ye-15 yokukhuphela usetyenziso okanye imidlalo. Kuba wonke lo mthombo ungentla ungowesibini ngokwendalo, singacebisa ukuba ukhuphele isichasi-ntsholongwane esilungileyo kwizixhobo zakho okanye iPC phambi kokuba ukhuphele naziphi na izicelo zokukhusela izixhobo zakho.
Nangona kunjalo, onke la maqonga angasentla ayindawo nje yeGoogle Play Store kwaye ayinakuthatha indawo yenjongo yeGoogle Play Store. Le ndlela ingenye ingasetyenziselwa ukukhuphela ezo zokusebenza ezingafumanekiyo kuGoogle Play Store okanye zifumaneke ngamaxabiso aPhakamileyo. Ndiyathemba ukuba siyanelisa ingxaki yakho yokufumana eyona ndlela ilungileyo kuGoogle Play Store.
Kukwabalulekile ukuba wazi ukuba iifayile ze-APK azigunyaziswanga, kwaye ke akukho mntu unokuqinisekisa ukhuseleko nokhuseleko lwazo. Imithombo emininzi engaziwayo yakhiwe ngeenjongo ezimbi ngumphuhlisi wayo kwaye isoyikise idatha kunye nokhuseleko lwayo kwifowuni yakho.
Ke, ukhululekile ukukhuphela ezi apps kodwa ngomngcipheko wakho. Asiyi kuba noxanduva kuyo nayiphi na impazamo okanye uqhekezo olunokuthi lwenzeke.